China Lawn roller mugadziri uye mutengesi | Ruiyi
Lawn chinotenderera inokubatsira iwe kuita tsangadzi yako shanje yevavakidzani vako nekuti inobvisa kukuvara kunokonzerwa nemhuka nemwaka.
Sarudzo yekutanga ye yekuzorora yekunze mota, zviri nyore, inoshanda uye inoshanda. Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
Yakavezwa neinorema basa dhiragi uye kutenderera pamabhegi, dia.
Iyo dhiramu inopa huremu hwakaringana kune iro rakaomesesa basa rekuumburudza, nepo rakatenderedzwa magumo anobata yako turf uye inobvumira nyore kutungamira.
Iko kupfeka kwehupfu ndiko kukwenya uye kusagadzikana kwemamiriro ekunze
Kuchengeta kuri nyore: kana iwe ukamonera patsangadzi yako, ingo dhonza uye urembedze ino compact roller mugaraji, kana iyo kabhini inotora nzvimbo diki.
Iyo isina roller yakatetepa uye yakapusa kutakura.
Dzivisa kukuvara patsangadzi: kupera kwesirinda kunobatsira kudzivirira kukuvadza patsangadzi panguva yekutenderera, nepo simbi yekutsvaira pamusoro pengoma ichidzivirira roller kubva pamarara kana ichitenderera.
Universal chirauro: ine rinorema basa repasirose hitch pini kuti ubatanidze nyore iyo roller kune chero mutasvi kana tarakita
Lawn chinotenderera akakodzera kudzima kukuvara uye kubatsira kumisikidza nyowani kukura kweiyo yakakwana, hutano huswa.
Mushure mekudyara, kutenderera kunobatsira kumhanyisa kumera nekuona kuti mbeu inosangana nevhu.
Shandisa girazi rakazara nemvura rakazara mvura kuti ubatsire sodhi nyowani kuti isimbiswe, kubvisa homwe dzemhepo uye kuona midzi ichisangana nevhu.
Kana makonzo nezvipembenene zvakuvadza huswa hwako, a lawn chinotenderera inobatsira kutsetseka patsangadzi yeunifomu.
Kana uchigadzira mapindu uye tsangadzi, unogona kushandisa yedu mutemo chinotenderera, mutemo wedu roller inogona kubatsira kutanga nyowani kukura kweiyo yakakwana, tsangadzi ine hutano. Sarudzo yekutanga yemotokari yekunze yekuzorora, iri nyore, inoshanda uye inoshanda. Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza Usati wadyara mbeu yehuswa nyowani, lawn roller inogona kubatsiranzvimbo isina kuenzana pasi. Mushure mekudyara, kutenderera kunobatsira kumhanyisa kumera nekuona kuti mbeu inosangana nevhu. Shandisa girazi rakazara nemvura rakazara mvura kuti ubatsire sodhi nyowani kuti isimbiswe, kubvisa homwe dzemhepo uye kuona midzi ichisangana nevhu. Kana makonzo nezvipembenene zvakuvadza huswa hwako, girazi rinotsemuka lawn rinobatsira kutsikisa tsangadzi kuti dzienzane.
Vatengi vanowanzo taura kuti mashandisiro acho akanaka, mashandiro ari nyore, kumisikidza kuiswa uye mhando yepamusoro
Pashure: Kunze kwekuzorora mota